Visit Nepal 2020 -Logo
पर्यटन क्षेत्र प्रवुद्ध विज्ञ समूहको गठन
माननीय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री ज्यूसँग नेपालका लागि रसियन फेडेरेशनका राजदूत H.E. Mr. Andrei S. Budnik को शिष्टाचार भेट
माननीय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री ज्यूसँग नेपालका लागि इजरायलका राजदूत H.E. Mr. Benny Omer को शिष्टाचार भेट
माननीय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री ज्यूसँग नेपालका लागि न्यूजील्याण्डका राजदूत H.E. Ms. Joanna Kempkers को शिष्टाचार भेट
प्रेस विज्ञप्ति-१०० दिने कार्ययोजना प्रगति सार्वजनिकरण
वर्तमान सरकार गठन भएको १०० दिनमा सम्पादन भएका प्रमुख कार्यहरुको सार्वजनिकीकरण
मा. संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री ज्यूबाट पाटन दरवार क्षेत्रका सम्पदाको पुन निर्माण कार्यको निरिक्षण
मा. संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री ज्यूसँग SAARC का महामहिम महासचिवको शिष्टाचार भेट
अन्तराष्ट्रिय बौद्ध सम्मेलनको २०७५ उद्घाटन
२५६२ औं बुद्ध जयन्ती तथा अन्तराष्ट्रिय बुद्ध सम्मेलनको पूर्व सन्ध्यामा मा. मन्त्री ज्यूबाट अवलोकन